हिले ओलम्पिक शुरू गरौं | गृहपृष्ठ
Home तीतो मीठो हिले ओलम्पिक शुरू गरौं
on: July 20, 2018 तीतो मीठो
हिले ओलम्पिक शुरू गरौं
जब जब आर्थिक वर्षको अन्त्य हुन्छ, तब तब सरकारले अबौं अर्ब रुपैयाँ बालुवामा खन्याउँछ । केही अर्थात् मार्सी चामलका भात खानेहरु ‘गुड फिल’ गर्छन् । मार्सी खान नपाउनेहरु जिल पर्छन् । सामान्यजन के बुझ्दैनन् भने बालुवामा तरलता नहाल्ने हो भने असार साउनमा जमीन भिज्छ कसरी ? जमीन नभिजे रोपाइँ हुन्छ कसरी ? असार साउनतिर केही मानिस हिलोमा रोपाइँ गर्छन् । उनीहरुलाई त्यसो गर्न नेता र कर्मचारीहरुले सघाउँछन् । त्यस सहयोगबापत उनीहरुले धान र धन्यवाद प्राप्त गर्छन् । अनि मिलेर मार्सी चामलको भात खान्छन् । यसरी नेताहरु हिलोमा धान वा धन रोप्ने यी खेतालाहरुलाई टेवा दिइरहन्छन् र मेवा लिइरहन्छन् । सर्वसाधारण भने यति एउटा सामान्य अर्थराजनीति पनि बुझ्दैनन् ।
सारभूत रुपमा देश विकास गर्न असारमा नेता र अधिकारवाला सरकारी कर्मचारीले कत्ति मेहनत गरेका हुन्छन्, त्यो सामान्यजन बुझ्दैनन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कुन बजेट शीर्षकमा खर्च नभएको पैसा बाँकी छ भनेर रातभरि टर्चलाइट लिएर हेरेर, अध्ययन गरेर रातारात रकमान्तर गराउन भ्याउनुपर्छ । के यो सजिलो काम हो र ? त्यसपछि झरीमा रुझ्दै सडकहरु खन्ने, पानीका पाइप वा ढलका पाइप बिछ्याउने, शहर गल्लीमा पुराना इँटाहरु भत्काएर नयाँ इँटा ओछ्याउनेजस्ता काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । अझ सबैभन्दा कष्टकर त हिलोमा कालोपत्रे गर्नुपर्ने कार्य हुन्छ । संसारका सडक इञ्जिनीयरहरु छक्क पर्दा हुन् कि नेपालीहरु कला, संस्कृतिमा मात्रै धनी नभई हिलोमा विकासको मूल फुटाउन सक्ने क्षमतावान् पो रहेछन् भनेर । यही असारे विकासको नेपाली मोडल हेर्ने भनेर नै हुनुपर्छ विगतका वर्षमा भन्दा यस वर्ष वर्षामा पनि नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकहरुको सङ्ख्या बढेको छ ।
विगतमा केन्द्रबाट सरकारका मन्त्री, कर्मचारीहरुले गर्ने असारे विकास अब हरेक प्रान्त र खासगरी प्रत्येक स्थानीय निकायका मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष आदिले पनि गर्न पाउने भएका छन् र धेरैले डोजर किनेरै शुरु पनि गरिसकेका छन् ।
वास्तवमा असारे विकासकै कारणले अहिले नेपालका लागि पर्यटनलाई थप प्रवर्द्धन गर्ने ठूलो मौका आएको छ । संसारमा विभिन्न खाले ओलम्पिक खेलहरु हुन्छन् । जस्तै, हिउँदमा विण्टर ओलम्पिक, गर्मीमा समर ओलम्पिक, शारीरिक रूपमा समस्यामा परेकाहरुका लागि पारा ओलम्पिक । अब नेपालले आफ्नै अर्को ओलम्पिक खेल शुरु गर्न सक्छ र त्यो हो हिले ओलम्पिक, जसमा सबै खेल हिलोमा खेलिनेछ । हिलोमा हिले मोटर रेस वा कार र्‍याली गराउन सकिन्छ । हिले ओलम्पिक आयोजनामा खासै खर्च पनि लाग्दैन । किनकि स्टेडियम बनाइरहन परेन । नेपालभरि जुनसुकै सडकमा यो खेल आयोजना गर्न सकिन्छ । काठमाडौंको त झन् कुरै गर्नु परेन । यो खेलमा दर्शकदीर्घा पनि राख्नपर्दैन । किनकि फुटपाथमै उभिएर यो खेल हेर्न मिल्छ । झन् हालसालै अदालतले सडक विस्तार गर्दा मुआब्जा दिएर मात्र गराउनु भनिसकेकाले अब २/४ वर्ष हिले सडक चिल्ले बनिहाल्ने छाँटकाँट पनि देखिँदैन ।
कार निर्माता र विक्रेताहरुका लागि हिले मोटर रेस आफ्नो व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने एउटा ठूलै मौका हुनसक्छ । प्रायः कार निर्माताहरु नयाँ कार बनाएपछि अहिले मरुभूमिमा लगेर टेष्ट ड्राइभ गराउनुपर्ने बाध्यतामा छन् । किनकि उनीहरुसँग हिला सडकहरु छैनन् । तर, उनीहरुका लागि नेपालमा अब हिलोमा पनि टेष्ट ड्राइभ गराउने, हिले रेसमा भाग लिन लगाउने र आफ्नो कारको क्षमता जाँच्ने र ब्राण्ड प्रमोशन गर्ने अवसर आएको छ । उनीहरुलाई त्यो लाभ सित्तैमा लिन किन दिने ? शुल्क ठटाउनु पर्छ । तिर्छन् । खुशीको कुरा यो छ कि सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुगिसकेको छ । विगतमा केन्द्रबाट सरकारका मन्त्री, कर्मचारीहरुले गर्ने असारे विकास अब हरेक प्रान्त र खासगरी प्रत्येक स्थानीय निकायका मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष आदिले पनि गर्न पाउने भएका छन् र धेरैले डोजर किनेरै शुरु पनि गरिसकेका छन् । यो वर्ष कर्मचारी र बजेट निकासको अन्योलले हिले सडक खन्ने नामको विकास धेरै गर्न नपाए पनि आगामी वर्षदेखि काठमाडौंमा जस्तै वा त्योभन्दा पनि हिले सडक विकास देशका गाउँगाउँ, शहरशहरमा बढ्ने ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।
विकास अझै बढाउने हो भने अबउप्रान्त सरकारले एउटा काम तुरुन्त गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यो भनेको के भने निर्माण कम्पनीहरुलाई मोबिलाइजेशनको रकम २० प्रतिशत बाट बढाएर ८० प्रतिशत बनाई आर्थिक वर्षको शुरुमै वितरण गर्दिनुपर्छ । त्यसो भएमा ठेकेदारहरुले त्यो पैसा समयमै अहिलेझैं अरु क्षेत्र जस्तै : घरजग्गा, सुनचाँदी आदिमा लगानी गर्न सक्छन् । यसले गर्दा अन्य क्षेत्रको पनि विकास साथसाथै हुन थाल्छ । दोस्रो, निर्माण कम्पनीले बुझाउनुपर्ने पार्टी लेबी, कमिशन आदि पनि समयमै बुझाउन सक्छन्, जसले गर्दा काठमाडौंमा थप शिक्षण अस्पताललगायत पूर्वाधारको निर्माण कार्यले गति लिन सक्छ । यति मात्र गर्ने हो भने नेपालले यसै वर्षदेखि काठमाडौं लाजधानी सरी राजधानीमै हिले ओलम्पिक शुरु गर्न सक्छ । आफ्नै जीवनकालमा आफ्नै देशमा ओलम्पिक हेर्न पाउने यो पंक्तिकारलगायत भाग्यमानी सबै नेपाली जनतालाई अग्रिम शुभकामना र बधाई छ है !